မိမိနှင့် အခြားသူနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ခိုင်းပါ | Siyin Chin Baptist Church
ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် အခြားသူများ လိုချင်သည့်ပုံစံအတိုင်း ဘ၀ခရီးလှမ်းခြင်း။
“Do your own work well, and then you will have something to be proud of. But don’t compare yourself with others.” (Galatians 6:4) မိတ်ဆွေရဲ့ လုပ်ရပ်ပုံစံကနေရလာတဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို အခြားသူနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ခိုင်းတာ အကြောင်းကြီးနှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။
ပထမတစ်ရပ်ကတော့ – မိတ်ဆွေထက် သာလွန်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မိတ်ဆွေမတွေ့ပဲ မနေပါဘူး။ အဲဒီအခါမှာ ယှဉ်ပြိုင်စိတ် မွေးလိုက်ရင် စိတ်ဓါတ်ကျစရာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ တစ်ရပ်ကတော့ – မိတ်ဆွေထက် ညံ့ဖျင်းတဲ့ အခြားလူတစ်ယောက်ကိုလည်း တွေ့ဦးမှာပဲ။ ယှဉ်ပြိုင်စိတ်ကလေး မွေးလိုက်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘ၀င်မြင့်စရာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာများစွာ ရေးသားခဲ့သူ ရှင်ပေါလုကလည်း မိမိကိုယ်ကို သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဟာ မိုက်မဲရာကျကြောင်း ဆိုပါတယ်။ သူက ဘာပြောသလဲ ဆိုရင်- “In all this comparing and grading and competing, they quite miss the point.” (2 Corinthians 10:12b) မိတ်ဆွေရဲ့ ဘ၀၊ အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစုခရီး လုပ်ရပ်ပုံစံကို နားမလည် နိုင်ပဲ ဝေဖန်ပြစ်တင်တဲ့ လူတစ်ချို့ ကို မိတ်ဆွေ တွေ့ ကြုံရမှာပါပဲ။ သူတို့ က သူတို့လိုချင်တဲ့ ပုံစံထဲကို မိတ်ဆွေကို ဆွဲသွင်းကြလိမ့်မယ်။ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်လည်း ဝေဖန်သူ တစ်ချို့ နဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ သူရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်ကတော့ အမြဲတမ်း အတူတူပါပဲ။ ယှဉ်ပြိုင်တာတွေကို ရှောင်ကျဉ်တယ်။ ပုံကြီးချဲ့  ပြောတာတွေကို တွန်းလှန်တယ်။
Pilgrims Progress စာအုပ်ကို ရေးတဲ့ စာရေးဆရာ John Bunyan က ဘာပြောသလဲဆိုရင်- ”လူတွေ ဘယ်လောက် ချီးမွမ်းနေပါစေ အကျိုးမရှိဘူး ဆိုရင် ငါ့ဘ၀ဟာ အလကားပဲ။ လူတွေ ဘယ်လောက် ကဲ့ရဲ့ နေပါစေ အကျိုးရှိရင် တော့ ငါ့ဘ၀ဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်။”
Don’t compare or conform your shape to others
Source: ယုဒသန်ရိပ်သာ Blog
« Upna Nei in Nungzui Suakna (Rev. Dr. Thuam Cin Khai)
Patangte le Vantung ngam thu »